Angovo - AOOD Technology Limited
Androany, ny rivotra dia iray amin'ireo haitao mitombo haingana indrindra. Ny herin'ny rivotra dia mitaky fanovana ny herin'ny rivotra ho herinaratra amin'ny alàlan'ny fampiasana turbine rivotra. AOOD dia namolavola fahalalana momba ny turbine rivotra nandritra ny taona maro ary nahitana fahombiazana lehibe tamin'ny fanolorana rafitra fikojakojana tena ambany amin'ny tontolo masiaka.
Ny peratra slip dia matetika ampiasaina mba hanomezana famantarana elektrika sy herinaratra ho an'ny hery sy fifehezana ny pitch pitch. Ao amin'ny rafitra hydraulic, ny peratra slip sy ny union rotary fluid dia mila atambatra mba hanome famantarana maro,
fandefasana herinaratra elektrika sy herinaratra ho an'ny fihenam-bidy hidin-trano. Ao amin'ny rafitra herinaratra dia mila peratra slip miaraka amina herinaratra avo lenta handefasana signal sy herinaratra elektrika ho an'ny fihenan'ny feon-jiro.
Ilaina ny peratra avo lenta mba hanomezana fifindrana avo lenta ho fampatanjahana ny coil rotor ao amin'ny rafitry ny fiara mivantana. Ankoatr'izay, mba hihaonana amin'ny filan'ny fivondronan'ny peratra tafiditra, ny peratra AOOD dia azo ampidirina miaraka amin'ny encoders sy resolvers, fibre rotary optika rotary, sendika rotary fluid ary RF rotary joint.
Satria ny mpitarika manerantany amin'ny peratra slip dia nametraka, ny AOOD dia namolavola teknolojia fampitana fifandraisana avo lenta izay manome antoka fa ny peratra fitondra herin'ny rivotra AOOD dia mihoatra ny 100 tapitrisa fihodinana mandritra ny androm-piainany. Natao hifanaraka amin'ny tontolo iainana henjana koa izy ireo, mahazaka ny hafanana avo na ambany be, ny fidiran'ny fasika sy vovoka ary ny harafesin'ny ranomasina.
Vokatra mifandraika: Rantsan-tànana manokana